အယူအဆအစည်းအဝေးကနေဆွေးနွေးချက်အချက်များ 16/1 | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 18 ဇန္နဝါရီလ, 2013 အားဖြင့် Holmbygden.se
Här är antecknade diskussionspunkter som berördes vid onsdagens idé-mötet på Österström, 13/1 2013. Det var ett givande möte med många kloka ord från ett tjugotal Holmare. Nytt på hemsidan är att tidigare mötesanteckningar har samlats under sidan “အစည်းအဝေးတွေနဲ့မိနစ်” (där tidigare endast HBU:s protokoll funnits).
ကျေးလက်ပိုက်ဆံရည်ရွယ်လေတိုက်တာဘိုင် bevakas för Holmborna av Dan Johansson. သူတို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သဘောတူ, အခြားသူများအကြားပါနဲ့. Nötåsenဂေါ်ပြားမှလမ်း. ဖေဖော်ဝါရီလဖြိုဖျက်ရွက်တိုင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတိုင်းတာခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည်. မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပြီးကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးကျေးလက်ထောက်ပံ့ကြေးလက်ခံရယူကိုက်ညီအဖှဲ့အစညျး၏အဘယ်အရာကိုပုံစံမြင်ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါအလှူငွေတစ်ခုလုံးကိုခရိုင်အကြိုးခံစားသမျှဖြစ်ရလိမ့်မည်.
Dan informerade mer om läget med အကြီးတန်း Home နဲ့ဆရာရဲ့အိမ်ရာ.
Tommy နှင့်အတူ check လုပ်ထား Björn Nordling – Mittland လာနှင့်ခေါင်းဆောင်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန် (မြေယာ Bygdsiljum bidrag). သူသည်ယနေ့တက်ရောက်ရန်နိုင်ဘူး. နောက်တဖန်ကြိုးစားနေ.
– Niklas ယခင်ကစိတ်ဝင်စားရင်ဆိုင်, ယန္နေ, av affärn och visar bygdens intresse.